Soa fanampiana - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
lasopy36 minitraOlona 4
ny Virtues González
Nanana ilay tovolahy ratsy kely aho, ary tsy te hihinana izy. Somary kivy aho ary tsy hitako izay homena azy hisakafo hariva. Ka tonga tao an-tsaiko ny hanome ron-kena misy paty tsara, tiany io.
Manana siny ao anaty vata fampangatsiahana foana aho saingy tsy nanana izany androany. Ka nihazakazaka nankany amin'ny fivarotana lehibe aho, nividy iray mifoha y ao anatin'ny 45 minitra latsaka Efa nomaniko ity ron-kena ity, izay nohaniny tamim-pahagagana.
Manararaotra izany fotoana izany aho misaotra anao amin'ny fandraisana anao. Ny marina dia manana vertigo aho, satria ity dia a bilaogy natambatra ary miaraka amina matihanina roa lehibe toa an'i Silvia sy Elena. Heveriko fa ireo mpampianatra ahy. Elena dia namela banga lehibe, izay tsy tiako hofenoina. Mpahandro mahavariana izy, ary fialamboly aho. Samy manana ny endriny isika, ka tsy mikasa ny hisolo azy mihitsy aho. Manantena aho fa tianao ny resako.
1 Lasopy lasopy
Miaraka amin'ny legioma vitsivitsy ary manofa kely ianao dia hanana volo lehibe.
Fotoana hiketrehana: 36M
hake 400 g (eo ho eo) (lohany, silaka lehibe sns)
sira mba hanandrana)
Manamboatra legioma izahay ary manidina azy ireo ao anaty siny, manosotra 10 segondra, hafainganam-pandeha 4.
Mametraka ny sobika izahay ary mametraka ny trondro sy manarona rano. (Sahabo ho 2 litatra. Ilaina ny mandray ny mariky ny fahaizan'ny fitaratra ambony indrindra).
Izahay dia manao fandaharana 35 minitra, 100º, hafainganana 2
Rehefa vita dia esorinay ny harona miaraka amin'ireo trondro.
Raha mila broth miaraka amin'ny tsy fitoviana bebe kokoa isika dia tsy maintsy manoto ny legioma miaraka amin'ny ron-kena mandritra ny 1 minitra amin'ny hafainganam-pandeha 5.
Fanazavana fanampiny - Miaraha amin'ny ovy
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Latsaky ny adiny 1, TRONDRO, Resipeo ho an'ny ankizy, Lasopy sy menaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Ho an'ny fotoana » Latsaky ny adiny 1 » Lasopy lasopy
Begoña Gongora dia hoy izy:
Sakafo Virtoaly tsara, izay tian'ny zanako lasopy. Ataoko amin'ny hena foana, fomba fihinanana trondro hafa.
Valiny tamin'i Begoña Góngora
Yolanda ruiz garcia dia hoy izy:
Manoratra an'ity fomba fahandro ity aho, mora be, miaraka amin'ireo akora izay anananao ao an-trano foana sy mandritra ny fotoana toy ny zanakao, 10 !!!! Miarahaba anao.
Manantena aho fa efa toy ny raozy ny zanakao. oroka hoanareo roa !!!!
Valiny tamin'i Yolanda Ruiz Garcia
Hevitra tsara momba ny virtoaly ……. Misaotra anao . Tsara ho an'ny sakafo hariva ...
Resipeo tsara misaotra betsaka ary nihatsara ny kely :))
Salama Virtues, voalohany indrindra tongasoa ary ny ron-kena izay toa tena tsara, manontania anao fotsiny hoe ohatrinona no apetrakao voatavo. Misaotra anao
Misaotra tsara, nametraka sombin-javatra kely teo amboniny aho, tsy haiko hoe ohatrinona ny lanjany fa mieritreritra aho 100gr, tsy tonga izany. Satria ny hevitra dia tsy matevina loatra, izany hoe tamin'ny farany notorotoroiko ny zava-drehetra mba hahatonga azy io hifanaraka kokoa, fa miaraka amin'ny firafitry ny ron-kena ahafahana manampy ny fideitos.
notorotoroina ny zava-drehetra afa-tsy ny trondro, izany hoe ny legioma rehetra.
Misaotra betsaka tamin'ny recette;
Tsy azoko ny zavatra iray: raha esoriko amin'ny trondro ny trondro dia tokony hanolotra lasopy ianao raha tsy misy trondro, sa tsy izany?
Mankany amin'ny takelaka faharoa ilay trondro sa inona no mahazo azy?
Salama Mario, ny zava-dehibe amin'ity lovia ity dia ny ron-kena, azonao atao ny mandray sombin-tànana na ny loha. Raha mampiasa ny lohanao ianao, dia hariana ary raha mampiasa hake ianao, dia azonao atao ny manararaotra azy io ho fanarahana ny ron-kena, na mampiasa azy amin'ny resipeo hafa, croquette, omelet, sns ...
Ao an-trano izahay dia mpandidy lasopy ary ity lasopy ity dia toa mora sy matsiro miaraka amin'izay.
rohy dia hoy izy:
Ity lovia ity dia ho tia ny zanako lahy kely, sotro bebe kokoa izy. Misaotra anao Virtues.
Mamaly an'i Elo
Tongasoa ato amin'ity bilaogy ity !!! Ary ny fomba fahandro tena tsara ho antsika rehetra ity lasopy trondro ity. fiarahabana
Rosa Kullstrom dia hoy izy:
Novakiako fa nanana ny ratsy kely ianao. Tsy te hihinana izy ... aza matahotra fa tonga foana ny hanoanana rehefa manasitrana ianao. Ny hery handevonana ny sakafo dia miditra amin'ny fanasitranana. Jereo ny alika kely rehefa tsy misakafo izy. Miala tsiny fa nanome anao ity fampandrenesana ity fa afaka mikaroka zavatra bebe kokoa amin'ny Internet ianao. Misaotra anao
Valiny tamin'i Rosa Kullstrom
Piluka dia hoy izy:
Ny hatsaran-tarehy dia toa matsiro tokoa ary manamora azy! Avelao hihatsara ny zanakao!
Valiny tamin'i Piluka
Salama Virtues, broth tena mankafy.
Avelao hihatsara ny zanakao kelikely.
Tongasoa ato amin'ity bilaogy ity ary miarahaba anao amin'ny resipeo.
Mª Consuelo dia hoy izy:
Salama Virtues, tongasoa ary misaotra noho ny resinao, antenaiko fa tsy noho ny aretina ny fialan'i Sivia, ary nihatsara ny zanakao lahy, te-hanontany anao toa ny zazavavy aho, saingy tsy nahita valiny aho, manana aho a THER. 1er taona ary ahoana ny fomba ampiharako ny vody sotro, misaotra betsaka.
Valio amin'i Mª Consuelo
Salama fiononana, voalohany indrindra misaotra amin'ny fandraisana.
Heveriko fa 21 ny Tmx anao, ny tena marina dia izao tsy fantatro tsara hoe ahoana no azo ampiharana azy, satria izaho dia mpankafy ary saika vao manomboka, tsy niaraka tamin'ny tmx nandritra ny roa taona aho, fa hiezaka Jereo.
Nojereko tamin'ny internet izany, ary ao amin'ny Tmx 21, dia tsy mila ny hafainganan'ny sotro, izay mitovy amin'ny fametrahana lolo sy hafainganana 1.
Ampahatsiahiviko fa tsy manam-pahaizana aho, ny nataoko dia ny fanaovana fikarohana kely amin'ny Internet. Andramo ity amin'ny fomba fahandro tsotra izay tsy mampiasa akora betsaka, raha mety aminao dia tohizo ny fanaovana resipeo amin'ny hafainganam-pandeha. (Ny hafainganam-pandehan'ny sotro dia ampiasaina mba tsy hampisarahan'ny lelany ny sakafo, rehefa mametraka ny lolo ary mandeha amin'ny hafainganam-pandeha, dia tokony hanome izany vokatra izany) Manantena aho fa mety aminao io.
letizia dia hoy izy:
… Misaotra ny hatsaram-panahy amin'ity resipeo ity !!!!… Hiezaka izany amin'ny zanako lahimatoa aho (22 volana izy) ... .. Tiako ny mbola hanohizanao mametraka resipeo ho an'ny ankizy !!!! …… .. misaotra ary oroka !!
Mamaly an'i letizia
Letizia zanako koa dia avy amin'ny 2009. Manana resipe-tsakafo ho an'ny menaka sy tsindrin-tsakafo tsara ho an'ny ankizy aho. Tian'izy ireo ny fomba fahandro amin'ny talata.
Misaotra antsika rehetra tamin'ny fandraisana ary antenaiko fa rehefa manandrana ireo fomba fahandro ianao dia avelanao amiko ny hevitro, misaotra anao indray. Cheers ...
meritxell dia hoy izy:
Omaly alina aho dia nanandrana azy io ho an'ny sakafon'ny zanako lahy, ary ny marina dia somary matroka izy io (mbola tsy nahazo ny ranon'ny sira tao amin'ny Thermo aho), fa nopotsehiko kosa ny legioma sy trondro ary nopetahan'ny paty kintana izany rehetra izany .
Misaotra amin'ny fomba fahandro mora!
Mamaly an'i meritxell
Salama Meritxell, zavatra mitovy amiko no mahazo ahy amin'ny resaka sira. Fa samy miaraka amin'ny Thermomix, toy ny nahandro nentim-paharazana, dia nataoko omaly ihany koa ary tsy hoe tsy azoko ny sira, dia ny tsy nahitako azy, namahana azy tamina sira kely kely teo ambonin'ny lovia aho ary dia izay ...
AMPE dia hoy izy:
Tongasoa aloha !!! Mpanaraka an'ity bilaogy ity aho nandritra ny herintaona, satria nividy ny thermomix aho ary avy any Seville koa.
Nataoko omaly antoandro io brothre io ary ny tena marina dia tena tsara, nosoloiko ny fe-akoho roa ho an'ny hake, ary ny tena marina dia tena tsara. Misaotra sy miarahaba !!
Valiny amin'ny AMPE
Misaotra Ampe, hisoratra anarana amin'ny akoho aho.
Mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra ataoko ho an'ilay kely izany, ary noho ny antony mora sy haingana toy izany. Izy io dia brothta ihany koa izay azo ampiasaina ho fitoeran-tsakafo.
Serealy miaraka amin'ny fromazy Feta sy legioma